I-loft engu-150 m2 enombono ohlukile
Pouzauges, Pays de la Loire, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Florence
U-100% wezivakashi zakamuva unikeze u-Florence izinkanyezi ezingu-5 ekuxhumaneni.
I-150 m2 loft enikeza umbono omuhle kakhulu we-panoramic wedolobhana lomlingiswa wasePouzauges. Amakamelo azohlinzekwa ngokuthanda kwakho (imibhede ephindwe kabili emi-3 noma imibhede engu-2 kanye nemibhede emibili eyodwa). Indawo yokuhlala ingeyesimanje manje, ikhanya ikakhulukazi inethala elikhulu elingashaywa indiva.
Izitolo ziseduze, ngeke udinge ukubuyisela imoto, okungase kube usizo uma ubuya ePuy du Fou.
I-loft inikeza igumbi lokuhlala elingu-80 m2 elinendawo yokuphumula e-alcove, ikhishi elikhulu elinendawo yokucima ukoma, netafula elikhulu phakathi kwezingxenye ezimbili.Amakamelo okulala amathathu, elinye lawo elivuleleka phezu kwethala, igumbi lokugezela elikhulu. okugeza kanye nezindlu zangasese ezimbili.
Isikhungo sedolobhana esinomlando esincane esinezimakethe, izindawo zokudlela, amakhefi, indawo yokubhaka kanye nesitolo esidayisa ukudla okulula sivula izinsuku ezingu-7 ngesonto. Ungakwazi ukuzulazula uye enqabeni yenkathi ephakathi emigwaqweni evamile yedolobhana elincane futhi uhambe ehlathini laseLa folie ngenhla nje.
Idiphozithi Yesibambiso - uma ulimaza ikhaya, kungenzeka ukhokhiswe imali efikela ku-$1697.
Hlola ezinye izinketho ezise- Pouzauges namaphethelo